मेसीको बयान – यो सिजन म बार्सिलोनामै बस्ने भएँ ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मेसीको बयान – यो सिजन म बार्सिलोनामै बस्ने भएँ !
मेसीको बयान – यो सिजन म बार्सिलोनामै बस्ने भएँ !
भदौ २० गते, २०७७ - ०९:४३
बार्सिलोना । लियोनल मेसीले बार्सिलोना छाडेर अन्यत्र जान चाहेको बताएको १० दिनपछि उनले ७० करोड तिर्न नसकेको कारण क्लब छाड्न नसकेको हो । गोल डटकमलाई अन्तर्वार्तामा उनल यो खुलासा गरेका हुन ।
जति बेला मैले बार्सिलोना छाड्ने निर्णय श्रीमती र बच्चाहरूलाई सुनाएँ, उनीहरू रून थाले । उनीहरू कोही पनि बार्सिलोना छाड्न चाहन्नन् । बच्चाहरू त स्कुल पनि फेर्ने चाहन्नन् ।म बार्सिलोनालाई धेरै माया गर्छुं । यस्तो राम्रो सहर अन्यत्र कतै पाइन्न । अब नयाँ चुनौतीका लागि तयार छु । बार्सिलोनामा मेरो सबथोक रहेको छ ।’
भदौ २० गते, २०७७ - ०९:४३ मा प्रकाशित